भरतपुर महानगरलाई एसियाकै उत्कृष्ट महानगर बनाउँछुः प्रमुखका प्रत्यासी तिमिल्सिना – Halkaro
- विप्लब काफ्ले
भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा राप्रपाबाट उम्मेद्वारी दिएका बद्री तिमिल्सिना स्पष्ट वक्ताका रुपमा चिनिन्छन् । पटिहानीमा जन्मिएका तिमिल्सिना हाल भरतपुरमा बसोबास गर्छन् । वीरेन्द्र क्याम्पसबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र (आईए) उत्तीर्ण गरेका तिमिल्सिना स्नातक तह पढ्दापढ्दै राजनीतिमा होमिएका हुन् । २०३६ सालमा राष्ट्रवादी स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डल चितवनको तेस्रो अध्यक्ष बनेका थिए । उनले पार्टी अध्यक्षका रुपमा १५ वर्ष काम गरेका छन् । बहुदल आएपछि उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चन्द्रमा बसेर सुरुमै पार्टी संगठन बनाउने कामको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे । राप्रपा विभाजनपछि उनी राप्रपा नेपाल चितवनको अध्यक्ष बने । पार्टी एकीकरणपछि हाल उनी राप्रपा चितवनको अध्यक्षसमेत हुन् । उनी भरतपुर अस्पतालको अध्यक्ष, जिल्ला विकास समितिको उपसभापति, जिल्ला बालकल्याण समितिको अध्यक्ष, शान्ति समिति चितवनका अध्यक्ष बनेर काम गरेको अनुभव संगालेका छन् । उनी पत्रकार महासंघ चितवनको स्थापनकालताका सहसचिवसमेत बनेका थिए । भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेद्वारी दिएका तिमिल्सिेनासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः
भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा तपाईंको उम्मेद्वारी किन ?
म यहिँको स्थायी बासिन्दा हुँ । यहाँका समस्या, सम्भावनाबारे जानकार छु । विगतमा पार्टी र सामाजिक संघसंस्थामा लागेर सफल नेतृत्व गरिसकेको छु । भरतपुर महानगरपालिका बनाउन पार्टीका तर्फबाट मैले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरें । महानगरका हरेक ठाउँका अवस्थाबारे मैले बुझेको छु । महानगरलाई अब्बल महानगरपालिका बनाउन मैले मेयर पदमा उम्मेद्वारी दिएको हुँ । पार्टीको अध्यक्ष पनि आफै, अनि मेयरमा पनि सबैलाई पछाडि फालेर आफै । जहाँपनि आफै बढ्न खोज्ने नेता भन्दारहेछन् नि तपाईंलाई त । सनातन हिन्दू राष्ट्र, राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, आर्थिक उदारवादलाई स्थापित गराउन मैले निर्वाह गरेको भूमिकालाई जिल्ला तथा केन्द्रले मूल्यांकन गरेको छ । पार्टीको अध्यक्ष बन्दा म सर्वसम्मत चयन भएँ । महानगरको मेयर बन्न धेरै आकांक्षी थिए । तर, छलफलका क्रममा मेरै नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने सवालमा विवाद भएन । जिल्ला संयन्त्रको सिफारिसमा मेयरमा उम्मेद्वारी दिएको हुँ । अवसरबाट वञ्चित गर्न खोज्यो भन्ने आरोप निराधार छ । यो अन्य दलले फैलाएको आरोप हुनसक्छ, जुनमा सत्यता छैन ।
मेयरमा उम्मेद्वारी दिएपछि जनतासँग के भनेर भोट माग्दै हुनुहुन्छ ?
स्पष्ट बोल्छु । कुरा लुकाएर बोल्ने बानी छैन । सुरुमै सबै कुरा गर्छु भनेर अहिल्यै म झुटा आश्वासन बाँड्दिन । गर्न सक्ने कामकै खाका लिएर घरदैलोमा पुगेको छु । महानगरलाई एसियाकै उत्कृष्ट महानगर बनाउन सकिने प्रवल सम्भावना छन् । उद्योग, वाणिज्य, सञ्चार, सडक, यातायात, पर्यटन, ऊर्जा प्रवद्र्धनजस्ता थुप्रै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हरेक वडामा स्तरीय कालोपत्रेसहितको सडक पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ । महानगरभित्र व्यवस्थित बसोबास, व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । यी थुप्रै काम गर्नसक्ने विश्वास छ । महानगरपालिकामा दुई विमानस्थल छन् । भरतपुर विमानस्थल आसपासका स्थानीय समस्यामा परेका छन् । मेघौली विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन सकिने सम्भावना छ । सुन्दर महानगरपालिका बनाउन सकिने हामीसँग थुप्रै योजना छन्, जुन सम्भव छन् । विगतमा ठूला दलबाट जनता आजित छन् । हाम्रो पार्टीका एजेण्डा जनताले रुचाएका छन् । जनताको साथ पाएमा मैले महानगरको मुहार र विकासमा आमूल परिवतर्न गर्न सक्छु ।
मेयर बन्दैमा यति छिट्टै सबै काम होलान् र ?
५ वर्षे कार्याकालमा हामी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने छौं । महानगरभित्र हुने चुहावट मात्रै रोक्न सक्ने हो भने धेरै सुधारका बाटा आफै सिर्जना हुन्छन् । राप्ती र नारायणी नदीलाई उपयोग गरेर ऊर्जा, पर्यटन, सिंचाईमा लगाउन सकिन्छ । जसले आर्थिक विकासमा सघाउनेछ । सबै सडकमा सोलार बत्ती जडान गर्न सकिन्छ । उज्यालो भरतपुर बनाउन सकिन्छ । महानगरपालिकाभित्रका सरकारी जग्गामा पार्क बनाउन सकिन्छ । सुरुको वर्षमा यति काम गर्न कुनै गाह्रो छैन । परिवर्तनको लहर अवश्य आउनेछ ।
महानगरका धेरै वडा विकासमा धेरै पछि छन्, तिनको विकासका खाका बनाउनु भएको छ ?
कविलास, साविक नारायणी नगरपालिका, चित्रवन नगरपालिकामा तत्कालीन उपमहानगरपालिकामा गरिने विकास कार्यक्रमभन्दा बढी योजना बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । जंगली जनावरबाट प्रभावित महानगरपालिकामा अध्याधुनिक मेस जाली प्रयोग गर्नुपर्छ । जसले सुरक्षित मावनवस्ती बनाउन सहयोग गर्नेछ । महानगरभित्र चक्रपथ अति आवश्यक छ । चक्रपथमा ‘मेट्रो ट्रेन’ व्यवस्था गराउन लाग्ने प्रतिबद्धता गरेको छु । महानगरभित्र फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थित ल्याण्डफिल साइट बनाउने योजना ल्याइनेछ । महानगरभित्रका हरेक सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा दिन कम्युटर अनलाइन प्रणाली सञ्चालन गराउन लाग्छु । महानगरभित्र बन्न लागेको चितवन प्रदर्शनी केन्द्रलाई पूर्णता दिन हामी लागिपर्ने छौं ।
चुनावका बेला योजना बन्छन्, आश्वासन आउँछन्, सबै पूरा होलान् भन्ने आधार के छ ?
हो, चुनावका बेला गरिने प्रतिबद्धता विगतमा धेरैले पालना गरेनन् । तर, हामी त्यो हुन दिदैनौं, यो हाम्रो विश्वास हो । हामीसँग काम गर्ने आँट छ, जोश र जाँगर छ । महानगरभित्र थुप्रै स्रोत परिचालन गर्न सक्ने अवस्था छ । मैले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न आफ्नो कार्याकाल पूरै बिताउनेछु । महानगर अब विकासमा लम्कनेछ । कृषियोग्य जमिनमा कृषि पूर्वाधार विकास गर्नेछु । मैले गर्न सक्ने काम मात्रै गर्छु भनेको छु । ती सम्भव हुनेछन् ।
विगतका चुनावमा राप्रपा र राप्रपा नेपालले हालको महानगरबाट राम्रो नतिजा हासिल गरेको थियो । महानगरको पश्चिम भेगमा हाम्रो पकड राम्रो छ । हिन्दू राष्ट्रलगायत हाम्रा एजेण्डा धेरैले रुचाएका छन् । महानगरमा दलबीचको चुनावी तालमेलले पनि सघाउने आँकलन गरेको छु । युवा, वृद्ध, महिला, सबै जातजाति, भाषाभाषीको साथले जित्ने कुरामा ढुक्क छु । अन्य दलका उम्मेद्वारभन्दा बढी म महानगरलाई चिनेको व्यक्ति हुँ ।
← निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोग नगर्न आग्रह
संसदमा महाअभियोगको विषयमा छलफल हुन पाएन्, सर्वोच्चले भन्यो तत्काल अगाडि नबढाउ →